एजेन्सी । उत्तर कोरियाका शा,सक किम जोंग उनले पहिलो पटक असफलताको लागि जनतासँग माफी मागे । ‘द गार्डियन’ समाचार पत्रकामा उल्लेख भए अनुसार किम जोंगले कोरोना महामा`रीको कठिन अवस्थालाइ नियन्त्रण गर्न आफु असफल भएकोमा माफी मागेका हुन् । माफी माग्दा उसले आँखामा आँसु पुछिरहेको देख्न सकिन्थ्यो । आफ्नो पार्टीको ७५ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दा उनी […]
साेउल, २३ असाेज । नेपालीहरूका लागि रोजगारीका लागि आक`र्षक गन्तव्य मानिने मुलुक दक्षिण कोरियामा १५ लाख बढी मज`दुरले आफूले काम गरेवापत पाउनुपर्ने त`लब रोजगारदाताबाट पाउन नसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यहाँको श्रम मन्त्रालयको तथ्याङ्कानुसार सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म १५ लाखभन्दा धेरै कामदारले नपाएको कूल त`लब रकम ७.१७ ट्रिलियन वोन पुगेको छ । सन् […]
October 6, 2020 October 6, 2020 adminLeaveaComment on चिनियाँ राट्रपति भन्नुहुन्छ : सम्पतिको लो`भ गर्नेहरुले कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीति गर्न सक्दैन…हेर्नुहोस् । चित्तबुझे सेयर गर्नुहोस्।
एजेन्सि : चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा राष्ट्रपति सी जिनपिङले व्यक्तिगत धन सम्पतिको लो’भ गर्नेहरुले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिन नहुने बताएका छन् । राष्ट्रपति सीले व्यक्तिगत धन सम्पतिको जोह गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरुले देश, जनता र कार्यकर्ताको सेवा गर्न नसक्ने बताए । चीनमा भ्रष्टा’चारविरु’द्ध विशेष अभियान चलाएर विश्व चर्चित बनेका सीले नीजि धन सम्पतिको लोभ गर्नेहरुले […]
October 5, 2020 October 5, 2020 adminLeaveaComment on कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता वा सो सरहका पद धारण गरेकाले अमेरिकामा स्थायी बसोबास अनुमति नपाउने
काठमाडौं, १९ असाेज । अमेरिकाले आप्रवासी नियम परिवर्तन गरेसँगै कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यले अब त्यहाँ स्थायी बसोबासको अनूमति नपाउने भएका छन् । अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा भएको भन्दै परिवर्तित अप्रवासी कानूनमा कम्युनिष्ट पार्टी वा सो सरहको पदमा रहेका ब्यक्तिलाललई अमेरिकाले नागरिकता र स्थायी बसोबासको अनूमति नदिने स्पष्ट पारेको छ । यूएस सिटिजन एण्ड इमिग्रेसन सर्भिस […]
October 5, 2020 October 5, 2020 adminLeaveaComment on राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बन्दै
एजेन्सी, १९ असाेज । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकाे स्वास्थ्य थप ज`टिल बन्दै गएकाे छ । शुक्रबार ट्रम्प र उनकी पत्नी मेलानिया ट्रम्पलाई को`रोनाभा`इरसको संक्र`मण पुष्टि भएको थियाे । ट्रम्पको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार शुक्रबार उनलाई ‘उच्च ज्वरो’ थियो भने शुक्रबार र शनिबार दुई पटक उनको रगतमा अक्सिजनको तह कम भएको थियो। एक समय उनको रगतमा […]
एजेन्सी, ११ असोज । चीनको एक कोइला खानीमा कार्बन मोनोअक्साइड ग्याँसका कारण कम्तीमा पनि १६ जना मज`दुरको ज्या`न गएको छ । दक्षिणपश्चिमी चीनको एक खानीमा सो दुर्घ`टना भएको बताइएको छ । चिनियाँ सरकारी टिभी सिसिटिभीले सो कुराको जानकारी गराएको हो । सो खानीमा कार्बन मोनोअक्साइड ग्याँस वि`स्फोट भएको र जसका कारण ती मज`दुरहरु भाग्न नसकेर […]
September 26, 2020 adminLeaveaComment on कोरोनाविरुद्धको खोप आउनु पहिले २० लाख मानिसको ज्या`न जान सक्छ : डब्लूएचओ
जेनेभा: कोरोना भाइ`रसविरु`द्धको प्रभा`वकारी खोप विकास हुनु पहिले यसको संक्र`मणबाट २० लाख मानिसको ज्या`न जान सक्ने विश्व स्वास्थ्य सं`गठन (डब्लूएचओ)ले चेता`वनी दिएको छ। डब्लूएचओका आप`तकालीन सेवा प्रमुख डा. माइक रायनले मिडिया ब्रिफिङका क्रममा यस्तो चेता`वनी दिएका हुन्। डा. रायनले पत्रकारसँगको कुराकानीमा २० लाख सं`क्रमित मानिसको मृ`त्यु ‘अस`म्भव नभएको’ बताएका हुन्। उनले हाल मृ`त्युदर घटे पनि […]
काठमाडाैं, ९ असाेज । दक्षिण कोरियाले इपिएस का`नूनमा परिव`र्तन गर्ने तया`रीसाथ हालको नि`यममा भएका केही बुँ`दालाई संशो`धनका लागि श्र`म मन्त्रालयमार्फत संस`द्मा पेश गरेको छ । परि`वर्तन हुने नि`यमानुसार का`र्यस्थल परिवर्तन गरेको श्र`मिक पनि ‘कमिटेड’ भई कोरियामा स`हज तरिकाले पुनः रोज`गारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका लागि आफूले पहिला छाडेको कामकै क्षेत्रमा नयाँ काममा लाग्नु पर्ने, […]
September 15, 2020 September 15, 2020 adminLeaveaComment on यसै सालकाे नोभेम्बरमा चीनकाे काे,राेना खाे,प बजारमा आउन सक्ने,,,,हेर्नुहोस्।
एजेन्सी, ३० भदाै । चीनले बनाइरहेकाे को,रोना भा,इरसवि,रूद्धकाे भ्या,क्सिन आ,गामी नोभेम्बरको सुरूमै बजारमा उप,लब्ध हुनसक्ने त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार चीनमा हाल अन्तिम चर,णकाे परी,क्षणमा रहेका खाे,पहरू आममा,निसको प्रयो,गका लागि चाँडै उपलब्ध हुनेछन् । समाचार एजे,न्सीहरूका अनुसार चाइनिज सेन्टर फर डि,जिस क,न्ट्रोल एन्ड प्रिभे,न्सन सेन्टरकी बायो,सेफ्टी विज्ञ गुइ,झेन वुले अहिले तेस्रो चर,णको परीक्ष,ण […]
काठमाडौँ, २७ भदौ । चीनकी महिला भा`इरोलजि,स्ट लि-में,ग या,नले को`रोना भा`इर`स मा,नव नि`र्मित रहेको आ`रोप ल,गाएकी छिन् । उनले को`रोना भाइ`रस मा,नव नि`र्मित रहेको र सो सम्बन्धि पर्या`प्त प्रमा`णहरु आफुसंग रहेको दा`बी गरेकी छन् । लि- मेँगले को`रोना भाइ`रस चीनको वु`हान राज्यको मा`सुपस,लबाट आएको नभई कुनै ल्या,वबाट उ`त्पति भएको बताएकी छिन् । को´रोना भाइ´रसको अध्यय´न […]